20 Somali tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha dalka Yeman. [Akhris …] – Radio Daljir
20 Somali tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha dalka Yeman. [Akhris …]
Sanca, Sept 01 – Inta lahubo 20 qof oo Somali ayaa ku dhintay xeebaha dalka Yaman ka dib markii uu shil ka dhacay laba doonyood oo ka mid ahaa afar doonyood oo siday tahriibayaal Somali ah oo gaaray xeebaha dalka dalka Yaman.
Mid ka mid ah doonyaha ayaa qallibantay markii ay ku xiratay xeebta magaalada Axwar ee gobolka Ebyan ee dalka Yaman, halkaasi oo lagu dajiyey dadkii kale oo loo qaaday xeryaha qaxootiga ee dalkaasi.
Dadkii dhintay ayaa la heley 6 qof oo kaliya iyadoo intii kalena la la?yahay raq iyo ruuxba, ciidanka badaha ee dalka Yamanna ay raadinayaan meydka dadkaasi dhintay.
Sida uu sheegey sarkaal ka tirsan ciidanka badda ee dalka doonyuhu waxa ay ka bexeen xeebaha gobolka Bari ee Puntland, waxaana la fiyalaa ayuu yiri mas?uulkaasi in tahriibayaal hor leh ay soo gaaraan dalkaasi maadaama la galay xilligii bad furanka.
Boqolaal Somali ah ayaa sannad walba ku dhinta xeebaha dalka Yaman iyagoo ka caraya dagaalada ka socda Somaliya gaar ahaan koonfurta oo saldhig u ah dhibaatada jirta.
Sidaasi oo ay tahayna dalka Yaman ayeysan jirin nolol sidaasi u wanaagsan oo ay kala kulmaan Tahriibayaashu, iyadoo wiilashu ay ka shaqeeyaan dhaqidda baabuurta gabdhuhuna ay guryaha ka shaqeeyaan, celcelis ahaanna waxa ay maalintii qaataan hal doollar, haddiiba ay nolol ku gaaraan dalka Yaman.
Dhinaca kalena Somali Tahriibayaal oo la helay iyagoo dooni kula jabtay xeebaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ayaa la keenay magaalada Tiriboli ee dalka Liibiya, waxaana ay diideen inay ka dagaan markabkii keenay oo laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Dadkaan ayaa codsanaya in la geeyo mid ka mid ah dalalka reer Yurub haddii la waayana loo celiyo Somaliya, laakiin marna aan lagu dajin Liibiya oo Somali badan ay xabsiyada ceegaagaan.
C/fataax Cumar Geeddi’